TCC Africa oo bixinaysa tababaro onlayn ah - AfricanArXiv
Xarunta Tababbarka ee Isgaarsiinta ayaa bilaabay inay ku bixiso koorsooyin khadka tooska ah ah.
Ms. Joy Owango, Agaasimaha Fulinta ayaa faallo ka bixisay arrintaas
Tani waxay qayb ka ahayd istiraatiijiyadeena sanadka 2019/2020, kaasoo, aan u gudbinay Abaalmarinta Invest2Impact kuna guuleystey.
Iyada oo ay taasi jirto, waan ku faraxsanahay horumarkan waxaanan sugeynaa inaan taageerno cilmi-baarayaal iyo aqoonyahanno dheeraad ah oo ku saabsan sida aan u horumarin karno wax soo saaristooda iyo aragtidooda, iyadoo la raacayo ujeeddadayada Tareen. Taageero. Awood cilmi baarista iyo bulshada aqoonta. ”
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Xarunta Tababarka Isgaarsiinta fadlan halkaan tag tcc-africa.org/about/
Iyada oo qayb ka ah hawlaheena ku saabsan u dhaqaaqista tababarka khadka tooska ah waxaan ku martiqaadeynaa webinar bilaash ah wehelkayaga Aqoonta E
cinwaanka "U Gudbitaanka Barista Internetka: Waxyaabaha Laga Hortago". Shabakadda webinar ayaa bixin doonta hagis ku saabsan 'waxyaabaha looga fogaado' iyadoo sahamineysa 3 eLa baran xirfadaha ugu wanaagsan ee loo adeegsan karo waxbarashada sare si loo gaaro natiijooyinka barashada guul leh ee siyaabaha wax soo saarka leh.
Fadlan iska diiwaan geli mid ka mid ah xiriiriyeyaashaan
Categories:	Capacity BuildingEventIsgaarsiinta Sayniska
libero mattis ut ut sit Nullam Praesent ipsum